I-AASraw inikezela ngemveliso ye-Cialis powder - i-Steroid Raws
/Blog/I-Archive yecandelo le "Cialis"
Izidakamizwa ze-tadalafil ekwenzeni unyango lwe-erectile (ED) Izicelo ze: I-Tadalafil i-PDE5 inhibitor edayiswe kwifomu yepilisi yokuphatha i-erectile disys function (ED) phantsi kwegama elithi Cialis, kwaye phantsi kwegama elithi Adcirca kunyango lwe-pulmonary blood pressure. I-CIALIS ibonakaliswe kunyango lwe-erectile dysfunction (ED) kunye [...]
Izipho zonyaka ze-5 'Izipho ze-tadalafil
Izipho zonyaka ze-5 'Izipho ze-tadalafil okhulayo. Ungakwazi ukufumana kalula i-tadalafil powder kwimarike, kodwa kunzima ukufumana i-99% yobungcwele budalafil powder, xa kuthelekiswa ne-gerneric tadalafil powder, i-99% yobungcwele bude tadalafil ininzi ekhuselekileyo, i-dose ephantsi, iphinda ilande ngakumbi. Enyanisweni, ngakwelinye icala, kubaluleke kakhulu, kuba [...]
I-Raw tadalafil powder vs Raw sildenafil citrate powder I-Raw tadalafil powder (Cialis) kunye ne-sildenafil ye-citrate powder (i-Viagra) yeziyobisi zomlomo ezisetyenziselwa ukwelapha ukungabi namandla (ukungakwazi ukufumana okanye ukugcina i-penile erection) kunye ne-benign prostatic hyperplasia (BPH). Bakho eklasini yeziyobisi ezibizwa ngokuba yi-phosphodiesterase-5 (PDE5) inhibitors ezibandakanya [...]